धर्म/सस्कृति – Krazy NepaL
आफ्नो बाटो आफै रोज किनकि तिमीलाई तिमीले भन्दा अरुले राम्रो संग बुझेको छैन – अनमोल भनाईहरु
१) तिमीले जे खोज्दैछौ, त्यसले तिमीलाई पनि खोज्दैछ । २) जसले आमाबाबुलाई स्वर्ग लिएर जान्छ त्यो छोरा हो, जसले स्वर्गलाईनै घरमा लिएर आउछ त्यो छोरी हो, र जसले घरलाईनै स्वर्ग बनाइदिन्छ त्यो बुहारी हो । ३) मान्छेले घर बदलिन्छ, सम्बन्ध बदलिन्छ, साथीलाई बदलिन्छ तर पनि ऊ किन खुशी हुन सक्दैन ? किनकि सबै बदलेर पनि उसले आफैलाई बदलिन बिर्सन्छ । ४) गल्ती गर्नु मानविय कर्म हो र क्षमा गर्नु इश्वरिय कर्म । ५) जिन्दगीको दौडमा यो जरुरी छैन कि तिमी अगाडी नै हुनुपर्छ र सबैलाई पछाडी पार्नु पर्छ भन्ने जरुरी त तिम्रो दौडमा सामिल भएर दौदिनुमा छ, थाकेर लड्नु र फेरी उठ्नुमा छ किनकि जिन्दगीको यहि रित हो जो आज अन्तिम छ भोली प्रथम पक्का हुन्छ बस निरन्तर दौडिनु जरुरी छ । ६) जबसम्म तिमी हासी राख्छौ तब सम्म यो दुनियाले तिमीलाई साथ् दिनेछ किनकि आँशुले त आखामा पनि ठाउ पाउदैन । ७) यो कोसिस गर्नु कि जिन्दगीको हरेक प
गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस १ गतेदेखि भक्तजनका लागि खुला गरिने भएको छ । भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस १ गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।। `पुस १ गतेदेखि मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनले पालना गर्नुपर्ने नियमसम्बन्धी मापदण्डसमेत कोषले तयार पारेको कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।´ उहाँका अनुसार भक्तजनलाई एउटा ढोकाबाट प्रवेश गराई अर्कोबाट निकाल्ने गरी व्यवस्था मिलाइने छ ।। विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले ज्योतिर्लिङ्गको पनि ज्योतिर्लिङ्ग अर्थात् महाज्योतिर्लिङ्गका रुपमा आस्था राख्ने मन्दिर नौ महिनादेखि बन्द रहँदा भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएका थिएनन् ।। सार्वजनिक यातायातलगायत अन्य क्षेत्र खुला हुँदा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुला नभएको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्
प्रत्येक मंगलवार भगवान् श्रीगणेशको पूजा आराधना गरिन्छ । दूबो विना गणेशको पूजा पूर्ण नहुने भएकोले गणेशलाई पूजामा मुख्य रुपमा दूबो चढाइन्छ । तुलसीलाई विष्णुको एक रूप नै मानिएता पनि गणेशजीलाई तुलसी अप्रिय लाग्ने हुनाले गणेश पूजामा तुलसीको प्रयोग वर्जित छ । दूबो र तुलसीका बारेमा भने एउटा राेचक कथा भेटिन्छ । कथा अनुसार प्राचीन समयमा अनलासुर नामक असुर थियो । उसले धर्ती र स्वर्गमा आतंक फैलाएको थियो । अनलासुर ऋषिमुनि र सर्वसाधारणलाई जिउँदै निल्थ्यो । असुरबाट त्रस्त भएर देवराज इन्द्रसहित सबै देवीदेवता र प्रमुख ऋषिमुनि भगवान महादेवसँग प्रार्थना गर्न पुगे । अनलासुर नामक असुरलाई अन्त्य गर्न उनीहरूले महादेवसँग अनुरोध गरे तर महादेवले असुरको अन्त्य गणेशजीले गर्ने बताए । अनलासुरसँग युद्ध गर्न गणेशजी गए । असुरले उनलाई निल्न खोज्यो तर उल्टै गणेशजीले असुरलाई निले । असुरलाई निलेपछि गणेशजीलाई बेस्सरी पेट
देख्ने बित्तिकै चोखो मनले ॐ लेखी पेज लाईक गरी5ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्ााा तपाईहरूको आजको दिन शुभ हुनेछ ााादेख्ने बित्तिकै चोखो मनले ॐ लेखी पेज लाईक गरी5ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्ााा तपाईहरूको आजको दिन शुभ हुनेछ ााादेख्ने बित्तिकै चोखो मनले ॐ लेखी पेज लाईक गरी5ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्ााा तपाईहरूको आजको दिन शुभ हुनेछ ााा ख्ने बित्तिकै चोखो मनले ॐ लेखी पेज लाईक गरी5ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्ााा तपाईहरूको आजको दिन शुभ हुनेछ ाााा मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो । अदृष्य शक्तिप्रतिको डर अनि त्रासको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवीकरण गर्यो । प्रकृतिका विविधरुपलाई फरकतपाई भाग्यमानी कि अभागी?? यो गुफाको तस्बिर छोएर राम्ररी हेर्नुहोस, भाग्यमानीले मात्र भगवान देख्ने बिश्वास छ फरक शक्
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ।धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ । विषयसूची [लुकाउने] १ किसिम२ हिन्दू धर्ममा प्रयोग३ औषधीका रूपमा प्रयोग४ सन्दर्भकिसिम[सम्पादन गर्ने]शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन नि
कैलाश पर्वतका नाम 'जो'कोहीले सुनेकै 'हुनुपर्छ' । शिव 'पुराण, मत्स्य पुरणा, स्कन्द पुराण अथाव भगवान शिवको महिमा वाचन गर्दा ‘कैलाश पर्वतको’ नाम र महिमाको जताततै चर्चा हुन्छ ।देवताका पनि देवता आरध्यदेव महादे'व र माता पार्वतीको वासस्थान रहेको पवित्र पर्वत नै कैलाश पर्वत हो । पौ'राणिक ब्याख्या अनुसार यस पर्वतका चार मुखहरु स्पटिक, रुबी, निलम, र स्वर्ण श्रृंगारको प्रतिकको रुपमा अनेकौं रत्नले सुस्वभित मुद्रामा रहेको छ ।हेमश्रीङ्ग, वैद्युत, क'कुन्दमान र वरुण, श्रिङ्गवान र हिरण्याश्रिङ्ग जस्ता छ वटा दिब्य पर्वतहरुको बिचमा अवीस्थत यस पर्वत'कोलाई कमलको फूलको प्रतिकको रुपमा पनि लिइन्छ । स्वयं भगवान शिवलाई नै कैलाशको नामले पुकारिन्छ । यो हिन्दूधर्मको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल पनि हो । कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी पर्वत हो । जहाँ धेरै रहस्यहरु रहेका छन् ।मानसरोवर स्थित कैलाश पर्वतमा साक्षात भगवान शिव विराज
हरेक मान्छेमा 'छुट्टा छुट्टै स्व'भाव हुन्छन् । जसले गर्दा' हरेक मान्छेको 'भाग्य प'नि फर'क फ'रक हुन्छ । समुद्रशास्त्रमा शा'रीरिक अंगको बनावट तथा रु''प रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्ति'को भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरिएको छ । जसकै आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्य हेरिन्छ । समुन्द्रशास्त्रका अनुसार यी' ६ गुण भएका युवतीह'रु सार्है भाग्यमानी हुन्छन् । १.समुन्द्रशास्त्र'का अनुसा'र जुन युव'तीको अनुहार पितासँग मिल्छ 'त्यस्ता युव'ती भाग्य'मानी हुन्छ'न् । त्यस्तै' आमासँ'ग अनुहार मिल्ने युवक पनि भाग्यमानी मानिन्छन् । २.कालो कपा'ल भएका र आगाडि'तिर झुके'को कपा'ल हुने युव'ती भाग्यमानी हुने समुद्र' शास्त्रमा उ'ल्लेख छ । चिल्लो, कोमल र मुलायम कपाल भएका युवतीलाई उत्तम मानिएको छ ।' ३.गोलो र चिल्लो तथा आकर्षक अनुहार भएका युवती पनि भाग्यमानी हुन्छन् । ४.जुन युवतीको शिरको अगाडीको भाग उठे
प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा शालिग्राम सङ्ग्रहालयमा राख्नका लागि शालिग्राम ढुङ्गाको सङ्कलन र संरक्षण शुरु गरिएको छ । निकट भविष्यमा निर्माण गरिने शालिग्राम सङ्ग्रहालय (सिसमहल) मा राख्नका लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिले शालिग्राम सङ्कलन र संरक्षण शुरु गरेको हो ।क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेलले हिन्दूले शालिग्रामको दर्शन र अवलोकन गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय बनाउन लागिएको जानकारी दिए । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने तथा हिन्दू धर्मावलम्बीले पवित्र मान्ने शालिग्रामको संरक्षणका लागि समितिले पहल शुरु गरेको उनले बताए ।“वेदशास्त्रमा पनि गण्डकी र शालिग्रामको विशेष महिमा रहेको बताइन्छ, दामोदर कु’ण्डबाट मुक्तिनाथ हुँदै देवघाट क्षेत्रसम्म आएको तटीय क्षेत्रमा पाइने शालिग्राम महत्वपूर्ण सम्पदा हुन्”, उनले थपे “कतिपयले शालिग्रामको व्यापार व्यवसाय गरेर बेच्न पनि लागे, हामील
ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस :परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने ह
काठमाडौ । सपना देख्नु सामान्य हो, तर कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ भन्ने कुरो चाँही महत्वपुर्ण हो । हरेक दिन हेरक मानिसले फरक फरक सपना देख्ने गर्छन् । कतिले त बिहान उठ्दा के सपना देखिको त्यो पनि बिर्सन्छन् । सपना भनेको दिनभरीको काम अनि सुत्नुभन्दा अगाडी सोचिएको विषयलाई नै सपनामा देख्ने गरिन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ । तर हरेक सपनाको आ आफ्नै महत्व रहेको हुन्छ । त्यही भएर सबै सपना अरुलाई भन्नु हुँदैन भन्छन् ज्योतीष शास्त्रीहरु । डवली नेटवर्क ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’**** यी पाँच ओटा सपना देखे अहरुलाई भन्न हुँदैन ।यो सपनाले तपाई हाम्रो जिवनमा नै परिर्वतन ल्याउन सहयोग गर्छ । अरुलाई भन्यो भने सपनाको फल मिल्दैन भन्ने ज्योतिष शास्त्रमा भनिएको छ । 1. बलिरहेको दियोको साथमा भगवान प्रकट भएको देखेमा : बलेको दियो हाम्रो हिन्दु सस्ंकारमा शुभ मानिन्छ , यदि यस्तो सपना देख्नुभो